Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » Isayiniwe i-India ne-Germany Isivumelwano soBambiswano kwezoKhenketho
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
I-Indiya neJamani zityikitye isivumelwano samazwe amabini
I-Indiya ne-Jamani batyikitye isivumelwano samazwe amabini nge-India Association of Tour Operators (IATO) kunye ne-Deutscher Reiseverband eV, (DRV) yeJamani Travel Association yokukhuthaza ukhenketho olunamacala amabini phakathi kwala mazwe mabini ngokuthatha amanyathelo afanelekileyo okubuyisela ukhenketho nje imeko kuyinto eqhelekileyo, utshilo uMnu Rajiv Mehra Mongameli we-IATO.
IATO kunye neDRV bavumile ukwenza imizamo efanelekileyo yokwazisa amalungu ayo ngobulungu bayo yonke imibutho, izibonelelo zayo, kunye nemisitho eIndiya naseJamani.
Yomibini le mibutho iya kuthi iqhube inkqubo yotshintshiselwano lokuhamba kunye nenkqubo yoqeqesho ngendlela efanayo.
Ukutyikitywa kwesi sivumelwano kuya kuthumela umyalezo nakwamanye amazwe aseYurophu ukuba i-India ikulungele ukwamkela bonke abakhenkethi bamanye amazwe.
Isivumelwano sentsebenziswano esityikityiweyo satyikitywa nguMnu. Norbert Fiebig, Mongameli - Deutscher Reiseverband eV, Umbutho Wokuhamba eJamani, kunye noMnu.
Ngaphantsi kwesi sivumelwano, i-IATO kunye neDRV bavumile ukwenza imizamo efanelekileyo yokwazisa amalungu ayo ngobulungu bayo yonke imibutho, izibonelelo zayo, kunye nemisitho. eIndiya naseJamani. Amagosa ale mibutho yomibini aya kumenywa kwiingqungquthela zawo zonyaka kwaye aya kuqhuba inkqubo yokutshintshiselana ngehambo kunye nenkqubo yoqeqesho ngendlela efanayo.
IJamani yenye yeemarike eziphambili zokhenketho olungena ngaphakathi eIndiya, kwaye oku kuyakunceda ukuvuselela ukhenketho olungena ngaphakathi eIndiya kwaye kuya kunceda abahambela abakhenkethi abaphuma eJamani ukubuyisela ukuthengisa iiphakheji zaseIndiya.
Isivumelwano esisayinwe phakathi kweDRV kunye neIATO asizukuvula kuphela iingcango Amalungu eIATO ukunxibelelana namalungu eDRV kodwa uya kuthumela umyalezo nakwamanye amazwe aseYurophu ukuba i-India ikulungele ukwamkela bonke abakhenkethi bamanye amazwe nje ukuba iiVisa zabaKhenkethi kunye neenqwelomoya zakwamanye amazwe ziqalisiwe.
I-Indiya neJamani zinembali ende kunye. I-Indiya yayiyinxalenye yesithsaba saseBritane ngexesha le-WWI, kwaye ngelo xesha, i-Indian Indian Army yayalelwa ukuba inikele ngamajoni kumzabalazo wemfazwe oManyeneyo, kubandakanya ne-Western Front. Abaphembeleli benkululeko kwimikhosi yobukoloniyali bafuna uncedo lwaseJamani ekufumaneni inkululeko yase-India, nto leyo eyakhokelela kwiyelenqe lamaHindu-amaJamani ngexesha leMfazwe Yehlabathi I. Kwathi ngexesha leMfazwe yesibini (II) yeHlabathi, iinzame zemfazwe eziManyeneyo zahlanganisa imikhosi yamavolontiya ayi-2.5 yezigidi evela eBritish India.
IRiphabhlikhi yase-India esandula ukusekwa yayilelinye lamazwe okuqala ukuphelisa iMfazwe yaseJamani kunye neJamani emva kweMfazwe yesibini (II) kwaye ayizange ifune impindezelo evela eJamani nangona amajoni angama-24,000 asebenza kwiBritish Indian Army abulawa kwiphulo lokulwa neJamani eJamani. .
I-Indiya igcine ubudlelwane bezopolitiko kunye neNtshona Jamani kunye neMpuma Jamani kwaye ixhase ukumanyana kwabo ngo-1990.
I-Chancellor yase-Germany u-Merkel kunye ne-Nkulumbuso yase-India u-Modi
Kweli xesha langoku, u-Chancellor wase-Germany u-Angela Merkel utyelele i-Indiya ngokusesikweni ekhokelele ekutyikityweni kwezivumelwano ezininzi ezandisa intsebenziswano phakathi kwamazwe amabini, uninzi lwakutsha nje lube ngo-Novemba ka-2019 xa bekusayinwa izivumelwano ezili-17 phakathi kwe-India ne-Jamani.